Abiy Axmed Iyo Farmaajo Oo Ka Wada-Hadlay Qodob Lid Ku Ah Natiijadii Ka Soo Baxday Kulankii Hore U Dhexmaray Madaxweynaha Somaliland | Himilo Media Group
Abiy Axmed Iyo Farmaajo Oo Ka Wada-Hadlay Qodob Lid Ku Ah Natiijadii Ka Soo Baxday Kulankii Hore U Dhexmaray Madaxweynaha Somaliland
Addis Ababa, 6 Maarij, 2019 (Himilo) – Raysal-wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed, ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Madaxweynaha Dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo Shalay socdaal ku gaadhay magaalada Addis Ababa, waxaanay labada hoggaamiye ka wada-hadleen arrimo door ah oo khuseeya dhinacyada horumarka iyo Iskaashiga nabadda.
War kooban oo ka soo baxay xafiiska Raysal-wasaaraha Itoobiya, ayaa lagu sheegay in kulankaas diiradda lagu saaray sii xoojinta ammaanka mandaqadda oo ku jiray qodobbada heshiis ay labada hoggaamiye hore u kala saxeexdeen, Isku soo dhawaynta xiisadda ka dhex aloosan Soomaaliya iyo Kenya iyo sidoo kale sii-ambaqaadista Iskaashiga dhismaha iyo horumarinta Dekedaha.
Qoraalka ka soo baxay dowladda Itoobiya, ayaa lagu sheegay in kulankaas lagaga wada-hadlay sidii loo xaqiijin lahaa in xidhiidhka lala yeelanayo Somaliland ay qayb ka qaadanayso ama taageerayso dedaallada nabadeynta ee gobolka.
Qoraalka kooban ee ka soo baxay Xafiiska Raysalwasaare Abiy oo luqadda English lagu baahiyey oo aanu idiin soo tarjunnay, ayaa u qornaa sidan: “Raysal-wasaare Abiy waxa uu xafiiskiisa wada-xaajood laba geesood ah kula qaatay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed. Wada-xaajoodyada waxa diiradda lagu saaray Afar qodob oo ay ku jiraan xoojinta nabadda gobolka sida ku xusan heshiisyadii hore loo saxeexay; dedaallada lagu xaqiijinayo inuu sii xoogaystay xidhiidhka Soomaaliya iyo Kenya; sii socoshada Iskaashiga horumarinta Dekedaha; iyo xaqiijinta in Xidhiidhada lala yeelanayo maamulka Somaliland ay taageerayaan nabadda gobolka.”
Sida ku xusan qaabka loo dhigay qoraalka oo gebi ahaanba ka duwan wixii ka soo baxay kulankii hore u dhexmaray Madaxweynaha Somaliland iyo Raysalwasaaraha Itoobiya oo lagu xusay inay taageeraan wada-xaajoodka labada dhinac, waxa laga dareemayaa in Madaxweynaha Soomaaliya uu hoggaamiyaha dalka Itoobiya kala hadlay xidhiidhka uu la leeyahay dowladda Somaliland.
In kasta oo aan war-saxaafadeedkan lagu soo qaadin wada-hadallada Somaliland iyo Soomaaliya, haddana Kulan hore u dhexmaray Madaxweyne Muuse Biixi iyo Dr Abiy, waxa war-saxaafadeedkii ka soo baxay lagu sheegay in Madaxweynaha Somaliland ogolaaday codsi uu reysal-wasaaraha Itoobiya ugu gudbiyey dhex-dhexaadin iyo inay dib u bilaabmaan wada-hadallada labada dhinac.